ucwaningo Market kufanele iqondiswe isibonisi sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene kulo mkhakha womsebenzi. Ngenxa yalokho zezinyathelo eziphawulwe ngenhla okunzima izimpahla kumelwe alethwe ukwaneliseka umthengi nge izidingo zakamuva. ukusebenza ngendlela levakalako, igama elithi amela hierarchically ihlelwe kohlelo ukulawula ibhizinisi ibhizinisi emakethe, kanye ukulawulwa emakethe izinqubo ezihlukahlukene nge saziso nesifundo kwesikhashana kubo.
ucwaningo Marketing kusekelwe ukuthuthukiswa izidingo emakethe, ezifana obala, nokubikezela. Sokuba khona ukumaketha ngempumelelo kudinga ukwaziswa okunokwethenjelwa futhi ifike ngesikhathi, kulandele ukuhlaziywa yayo. Kuyinto kulesi simo, isiqondiso kubhekwe womsebenzi tesifundvo uyakwazi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zamakhasimende.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, singaphetha ngokuthi ucwaningo ukumaketha kusekelwe ukuqoqwa kolwazi benethuba nencazelo yalo okwengeziwe, kanye nokuhlola, futhi afakwa izibalo eyenziwa kumasevisi abafanele futhi ukuphathwa kwenkampani.
Abanye ochwepheshe, ucabangela lokhu umqondo, kungagcini imisebenzi yayo eyisisekelo ngaphandle ecacisa uhlobo. Nokho, kungaba ngcono ukuba afihle lokho ayikho definition Belyavskogo I. K. Ngakho, "yemakethe - umsebenzi ochwepheshe emikhakheni ehlukahlukene, eziqondiswe ekuhlangabezeni kohlaziyo nezolwazi ibhizinisi. Ngamanye amazwi, kuba yingxenye ebalulekile ukumaketha, ukwakha yesayensi ezingokoqobo self-isiqondiso. "
Ukuhlaziya yemakethe kuhloswe Ukukhetha bento, okuyiwona ungathatha njengoba lebhizinisi uqobo, futhi amabutho ukuthi zifakwe microenvironment (abahlinzeki, izimbangi, amakhasimende, kanye amaklayenti). Futhi, izinto kungenziwa abaqokelwe emakethe (federal noma lesifunda) kanye labantu.
Injongo ucwaningo ukumaketha kusekelwe ukudalwa Imininingwane-kohlaziyo semininingwane ekuthatheni izinqumo ezifanele, okuzothi ngesinye isikhathi kakhulu ukunciphisa izinga yokungaqiniseki. Kunezinto eziningi ezihlukahlukene izinjongo, ekwazi ukuletha ukumaketha zingahlukaniswa ngamaqembu ezine eziyinhloko:
- Search, ezihilela ukuqoqwa kolwazi asizayo (iyakwazi ukunikeza usizo olukhulu eningi ekwakhiweni imibono eyayisinesikhathi ethize ngenjongo ucwaningo olwengeziwe);
- achazayo, nokunikeza incazelo olunzulu ezinye izenzakalo futhi izici mayelana ethonyeni lawo futhi ubudlelwano;
- zokuhlola, okuyinto aqukethe e kokuhlola imicabango esemqoka mayelana izinhlobo ukhona ubudlelwano esiyimbangela phakathi ukuthengisela, izici okuhlongozwayo izimpahla kanye umthengi;
- exculpatory - eklanyelwe ukuthuthukisa umgomo Imininingwane kwakheka ngokuqiniseka, umbono, umbono noma isikhundla ukuphathwa kwenkampani.
Ukukhangisa Surreptitious njengoba indlela umthelela
Yiziphi eziyisisekelo ukumaketha odinga ukukwazi?
Amafa Net. I-oda izibalo nasendleleni.
Ezimpahleni ezingasuki phansi ngo-2011
Iqhinga okuncane ubumnando ekusebenziseni
Umngcele waseGeorgia neRussia. I-Checkpoint "Upper Lars". Indlela eya eGeorgia
Uyini iziqondiso ukuhlela zasemadolobheni
Izikweletu zomphakathi kanye ukungeneli kwesabelo sezimali wezwe
Sikhetha ukuvivinya umzimba kusuka ku-cellulitis kuma-femours namadokodo
Isobho ushizi. Recipe evamile, kanye garlic kanye inkukhu
Umcimbi Film Usuku empilweni yamasiko yezwe